समाज Archives - sandeshpost
Home > Archive by Category समाज
खोटाङको पाथेकाकी देवी गुरुङका श्रीमान सन्जिव राई वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवई पुगेको १७ वर्ष भयो । छोरो विशाल पनि झण्डै साढेतीन वर्षदेखि साउदीमा छन् । तर विदेशमा भएका श्रीमान र छोराले देवीलाई न फोन गरेका छन् न त खर्चबर्चनै पठाएका छन् । छोराको बारेमा अरुले सुनाएपनि श्रीमानको भने कुनै अत्तोपत्तो छैन । छोरो विशालले पहिले […]
December 12, 2018 December 12, 2018 admin26
साउदी र नेपाल सरकारबाट मृत्यु भइसकेको प्रमाणपत्र पाएका उनका श्रीमान् अब कानूनी रुपमा कसरी जीवित होलान त ? सन्तोषी मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र हेर्दै छक्क पर्छिन् । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको लक्ष्मीमार्गकी सन्तोषी तामाङको प्रश्न सुन्दा जसलाई पनि अचम्म लाग्छ, तर प्रश्नभन्दा धेरै अचम्मलाग्दा अनुभव भोग्दै सन्तोषीको जिन्दगीको रथ पनि अघि बढ्दैछ । कमाउन गएका श्रीमान् गुमाउनु, विधुवा […]
‘न्यानो काख’- मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिला र बालबालिकाको ‘स्याहार गृह’ !
December 11, 2018 admin9
काठमाडौं । समाजमा सबै मानिस सधै एउटै अवस्था हुँदैन । आज ठीक मानिस अर्को दिन समस्या पर्न सक्छ, मानिसक सन्तुलन गुम्न सक्छ । कतिका परिवारले रेखदेख गरी उपचार गर्छन भने मानिसक सन्तुलन गुमाउने अधिकांश सडकमा बेवारिशे हुन्छन् । सडकमा बेवारिशे हुनेहरु प्रति सायदैको ध्यान जान्छन् । तर लुभुकी श्री नेहा पोखरेल र उनको टिमले सडकमा […]
December 11, 2018 admin21
एजेन्सी। पत्निले विष सेवन गरेर ज्यान गुमाएपछि एक पतिले पनि आत्महत्या गरेका छन् । घटना हो भारतको । भारतको सिहोरीका २६ वर्षीय सुरेन्द्र दांगी सर्राफाकी पतिन नीता दांगीले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको २ दिनपछि उनले पनि आत्महत्या गरेका हुन् । पत्नीको निधनको समाचार सुन्ने वित्तिकै पतिले अस्पतालभन्दा १०० मिटर टाढा हाइवे पुगेर विष सेवन […]
केटाहरु केटीको कतै अन्यसँग प्रेम सम्बन्ध त छैन भनी बुझ्न चाहन्छन् । जसका कारण अधिकांश केटाहरु केटीको फेसबुक आइडीको पासवर्ड माग्न चाहन्छन् र च्याट हिस्ट्री हेर्न चाहन्छन्
हिजोआज बिहे र सम्बन्धका कुराहरु अधिकांशतः र प्राथमिक रुपमा फेसबुकमै सम्पन्न हुने गरेका छन् । भावि दम्पतिहरुले एकअर्कालाई त्यहीँ हेर्ने, उनीहरुका बारेमा जानकारी बटुल्ने, आफूसँग जोडा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चासो दिने कुरा फेसबुकबाट नै आँकलन गर्ने गरिन्छ । यसअघि बिहेका कुरा लमीले ल्याउँथे । हिजोआज आफन्तमार्फत् कुराकानी अघि बढ्न थालेको छ । जब आफन्तले […]
December 11, 2018 admin67
रुपले रुवाउँछ, सीपले खुवाउँछ’ यो उखान नौमूले बजारमा सिलाई कटाई पेशा गर्दै आएकी ३१ वर्षीया पबी गुरुङ्गको जीवनमा चरितार्थ भएको छ ।जवानी फक्रिँदै गरेको बेला १६ वर्षकी छँदा २०६० सालमा गाउँकै सन्तबहादुर लामिछानेसँग पबीकाे विवाह भयो । २०६७ मा श्रीमानले छोडे तर उनलार्इ सिलाइकटाईको सीपले साथ दिएको छ । सन्तबहादुर पबीकाे गाउँकै इष्टमित्रका छोरा हुनुुहुन्थ्यो, […]
दुई दिन पहिला पत्नीले खाइन् विष, खबर सुन्ने वित्तिकै पतिले गरे सुसाइड
December 11, 2018 admin10
एजेन्सी। पत्नीको निधनको समाचार सुन्ने वित्तिकै पतिले अस्पतालभन्दा १०० मिटर टाढा हाइवे पुगेर विष सेवन गरे। उनले आफ्ना मामालाई वाट्सएपमा म्यासेज गर्दै लेखे–दुखिन नहुनु म हाइवेमा छु।’ उनमा आफन्त जव हाइवेमा पुगे उनको अवस्था नाजुक भइसकेको थियो। उपचारको क्रममा उनको निधन भयो। अघिल्लो दिन पत्नीको पनि विष सेवन गरेपछि निधन भएको थियो। यो घटना भारतको […]
December 11, 2018 admin13
काठमाडौँ- गर्भ भाडामा लगाउनको लागि नेपालमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनले गर्भ भाडामा लगाएर अरुको बच्चा जन्माउनको लागि कानुन नभएता पनि कानुनले रोकेको भने छैन।भाडाका आमाबाट सन्तान जन्माउने पद्धति सरोगेट मदरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भनिसकेको छ।निकट भविष्यमा सरोगेट मदरलाई कानुनी रुपमै व्यवस्थित गरिने भएको छ। नेपालमा पनि भाडाकी […]
December 11, 2018 admin71
उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् । यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो सहरमा एकजना पनि अविवाहित पुरुष छैनन् । तर ६ सय जना अविवाहित महिला छन् । ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका तरुनी छन् । महिलाले नै […]
December 11, 2018 admin95
काठमाडौं – ‘मेरो श्रीमानलाई कसरी जीवित बनाउने होला ?’ पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र दराजबाट निकाल्दै सन्तोषीले सोधिन् । श्रीमतीको प्रश्न सुनेर छेवैमा बसेका उनका श्रीमान् सुवास तामाङ मुस्कुराए । सुवास जीवित छन्, त्यसैले मुस्कुराउँछन्, तर कानूनी रुपमा उनी मरिसकेका छन् । त्यसैले उनको साथमा आफ्नै मृत्युको प्रमाणपत्र पनि छ । ￼पतिको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र हातमा बोक्ने महिलामध्ये […]